ဓမ္မဓိဌာန်ကျသောအသိပညာနှင့်ပတ်သက်၍ (The Problem of Objective Knowledge) | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
The Problem of Objective Knowledge
လူသားတို့သည် အတ္တဘက်သို့ ငဲ့ကွက်လေ့ ရှိသည်။ သို့သော် ခေတ်ပညာတတ်များသည် တစ်သီးပုဂ္ဂလ အမြင်ကို လက်မခံလို၍ ဓမ္မဓိဌာန်ကျသော အမြင်ကိုသာ တန်ဖိုးထားလေ့ရှိသည်။ တစ်သီးပုဂ္ဂလအမြင်သည် မမှီခိုအပ်သော သဘောရှိသည်။
Human beings are naturally inclining towards subjectivism. However most of the intelligentsias are trying to appreciate objective knowledge. Subjective outlook is not accepted by learned persons because subjective outlook is not reliable and not significant.
သိပ္ပံသည် သဘာဝ သတင်းများကို ရယူရန် ကြိုးစားသောအခါ ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ သတင်းများကိုသာ ရယူလိုသဖြင့် ကိရိယာများကို အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော် ကိရိယာများကို အသုံးပြုသဖြင့် နောက်ပိုင်းတွင် မသေချာမှု နိယာမနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်။
So, scientists are trying to have objective informations about the natural phenomena by using apparatus. On the long run, even scientists, they are to face principal of Uncertainty.
မသေချာမှုနိယာမ ဆိုသည်မှာ ကိရိယာသုံး၍ လေ့လာလိုက်သော သဘာဝ ဖြစ်ရပ်သည် အရှိအတိုင်း ဆက်လက်မနေဘဲ ကိရိယာကြောင့် ရွှေ့လျှားသွားသော သဘောရှိသည်။ ဤအချက်ကြောင့် သဘာဝ၏ အရှိ အရှိ အတိုင်းကို သိပ္ပံပညာများ အသေးစိတ် မရရှိနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
This means we use the apparatus in the observation which are affecting the natural phenomena; consequently we can’t have natural data as it is.
ထိုအခါ ရူပဗေဒသည် အခြေခံကျသော အမှုန်များကို လေ့လာရာ၌ တိကျသေခြာမှုကို မရနိုင်ပါဟု ၀န်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဓမ္မဓိဌာန်ကျသော ပညာအတွက် ခိုင်လုံတိကျသော အဖြေများကို ပေးနိုင်သော နည်းစနစ်များ ရှိသည်၊ ဥပမာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ဓမ္မဓိဌာန်ကျသော အသိပညာကို ပေးနိုင်သည်၊ သို့သော် မှန်မှန်ကန်နှင့် လေးလေးနက်နက် ကျင့်ကြံ အားထုတ်မှသာ ဖြစ်နိုင်သည်။
So, that is the problem for scientists in searching for objective knowledge. On the other hand there are some methods such as Buddhistic teachings which are reliable for objective knowledge. But most of the Buddhists realize that we are to take practice seriously to be objective.
နည်းနိဿယမှာ ပေါ်သောစိတ်ကို ငြင်းဖျက်ရန် ဖြစ်သည်။ ဤသို့ ပေါ်လာသမျှကို ပယ်ခြင်း၊ ငြင်းဖျက်ခြင်း၊ အနိစ္စရှုခြင်း၊ အပျက်တင်ခြင်း လုပ်သောအခါ တစ်သီးပုဂ္ဂလဆိုင်ရာ အတွေးများသည် အပယ်ခံရလေ့ ရှိသဖြင့် နောက်ပိုင်းတွင် အတ္တကို ဗဟိုပြုသော စိတ်အသိများကို ပယ်နိုင်လာသည်။ ထို ပယ်နိုင်လာသော စွမ်းရည်သည် ဓမ္မဓိဌာန်ကျမှုနှင့် ယှဉ်သည်။ ဤကား လက်တွေ့ ကျင့်မှသာ သိနိုင်သည်။
The method is to cancel the subjective ideas whenever it occurs in our mind, so to speak. They practice seriously, every now and then and in the long run they are experts to cancel the subjective ideas, and with the result the power that can cancelled the subjectivism would be objective. So Buddhists, they realize the method of having objective outlook by taking meditations.
ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာများသည် ဓမ္မဓိဌာန်ကျသော အသိပညာကို ၀ိပဿနာဖြင့် ရရှိနိုင်ကြောင်း နားလည် သဘောပေါက်ကာ အသိပညာ၌ ရှေ့တန်းရောက်လာသည်။ ဤသို့ ကျင့်ကြံရာ၌ ဆရာကောင်းလိုသည်။ နည်းစနစ်ကလည်း မြတ်ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကျ ဖြစ်မှသာ အောင်မြင်မည်။
In this case to take meditation, we must have good learned master and the method might be exactly what Buddha taught.
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဤအတိုင်းကျင့်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ များပြားလှသည်။ ဤနည်းဖြင့် ဓမ္မဓိဌာန်ကျသော အမြင်ကို ခံယူနိုင်စွမ်းရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်များ မြောက်များစွာ ရှိလာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အပါအ၀င်ပင် ဖြစ်သည်။ ဤသို့ ကျင့်ခြင်းဖြင့် ဓမ္မဓိဌာန်ကျသော ဉာဏ်အမြင်ဖြစ်ကာ၊ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် ပေါက်မြောက် အောင်မြင်၍ နိဗ္ဗာန်ကိုပင် မျက်မှောက်ပြု တတ်လာသည်။
In Myanmar we practice seriously according to Buddhism and with the practical research, we have some ideas about objective outlook. Slowly and gradually Buddhists who practice practically attain the objective knowledge and also they have the power to visualize the noble element what you call Nibbana.
ထို့ကြောင့် တစ်နည်းပြောရလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ဓမ္မဓိဌာန်ကျသော အသိပညာရှာဖွေရာ၌ ကောင်းစွာ လမ်းညွှန်နိုင်သည်ဟု ဆိုရမည် ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာများသည် နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုသောအခါ လွတ်မြောက်မှုများ၊ ချမ်းသာမှုများ ရရှိသည်။
So Buddhism can solve the problem of objectivity by practical practicing Vippasanna and attaining Buddhistic goal which means Nibbana, the real freedom.
ဤကျင့်စဉ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အထင်အရှား ရှိသည်ဖြစ်ရာ ဓမ္မဓိဌာန်ကျသော အသိပညာကို တည်ဆောက်ရာ၌ မြန်မာများသည် ကမ္ဘာ့ထက် ရှေ့ရောက် ဦးဆောင်နေပြီဟု ယူဆနိုင်လေသည်။
Now in Myanmar we had already established the method to attain Nibbana that means to have the objective knowledge slowly and sincerely.
Tags: Buddhism, Nibbana
This entry was posted in Buddhism and tagged Buddhism, Nibbana. Bookmark the permalink.